Fiarovana ny Fahalalaham-pitenenana Sy ny Fanafenana Anarana Amin’ny Aterineto Ao Ekoatera · Global Voices teny Malagasy
Fiarovana ny Fahalalaham-pitenenana Sy ny Fanafenana Anarana Amin'ny Aterineto Ao Ekoatera
Voadika ny 13 Avrily 2015 14:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, čeština , Italiano, Español
Ireo nanasonia ny Fanambarana ho amin'ny Fahalalaham-pitenenana, ny Tsy Fitononana Anarana ary ny Fiainana Manokana amin'ny Aterineto ao Ekoatera.
Manoloana ny fanamelohan'ny governemanta ny fanafenana anarana sy ny fanarabiana amin'ny aterineto, maro ny fikambanana ao an-toerana sy iraisampirenena nanasonia ny Fanambarana ho amin'ny Fahalalaham-pitenenana, ny Tsy Fitononana Anarana ary ny Fiainana Manokana amin'ny Aterineto ao Ekoatera.
Anisan'ireo fikambanana ao an-toerana nanao sonia ny Usuarios Digitales sy ny Fundamedios, anisan'ireo fikambanana iraisampirenena sy vondrona vahiny nanatevin-daharana ny fanambarana kosa ny Access, Electronic Frontier Foundation, Derechos Digitales (Shily), Oficina Antivigilancia (Brezila), Fundación Karisma (Kolombia), TEDIC (Paragoay), Acceso Libre (Venezoela), ContingenteMx (Meksika), ary ny Enjambre Digital (Meksika).
Manipika ny fanambarana iombonana fa tsy heloka bevava ny fanafenana anarana ao amin'ny aterineto:
Manameloka izay fihetsika mahery setra rehetra vokatry ny fampiasana ny fahalalaham-pitenenana na fampiasana zo hafa izahay.
Anisan'ny ampahany manan-danja amin'ny rafitra mahaleotenan'ny aterineto ny fanafenana anarana. Toetra anatiny amin'ny firafitra sy ny endriky [ny aterineto] izany ary anisan'ny fototry ny fifandraisana antserasera.
manana anjara toerana lehibe, indrindra amin'ny zo haneho hevitra an-kalalahana, anaty aterineto na ivelan'ny aterineto ny tsy fitononana anarana.
Ny fampielezana ny tsikalakalam-panondroana olona manokana ataon'ireo olona mampihatra amin'ny fomba ara-dalàna ny tsy fanononana anarana dia endrika fandrahonana ny fahafenoan'ilay olona, fampiroboroboana ny sivana ary mampisy fiantraikany amin'ny maha-ara-dalàna ny fanaraha-maso ataon'ny fiarahamonina amin'ny asam-panjakana.
Raha tsy misy ny heloka bevava natao, tokony avelan'ny Fanjakana halalaka ny fanafenana anarana araka ity lalàna ity.
Ny tsindritsindry na [fanenjehana] virtoaly na mivantana ataon'ny vondron'olona amin'ny tsirairay, tsy ijerena ny firehana ara-politikan'izy ireo dia mety hiafara amin'ny fisarasarahana sy ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina.
Heverinay fa tokony hiantoka bebe kokoa ny fampiroboroboana ny fampiasana malalaka ny zontsika eo amin'ny sehatra nomerika ihany koa ny fanjakana.
Amarino ato raha hamaky ny Fanambarana ho amin'ny Fahalalaham-pitenenana, fanafenana anarana ary ny Fiainana Manokana an-tserasera ao Ekoatera.